ကာရစ်ဘီယံဒေသ၏ပုံမှန်အကများ - ဆဲလ်ဆာမှဘီချာတာသို့ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | အမေရိကတိုက်, ယဉျကြေးမှု
ကာရစ်ဘီယံဒေသ၏ပုံမှန်အကများမှာအတိတ်ကအမြစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေချိုးပြီးနိုင်ငံများစွာပါဝင်သောကျယ်ပြန့်သောရပ်ကွက်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည် ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် နှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ဤအပိုင်းမှဝိုင်းရံလျက်ရှိသောကျွန်းများလည်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြားရှိပါတယ် မက္ကစီကို, ကိုလံဘီယာ, နီကာရာဂွာ o ပနားမားအဆုံးစွန်သောနိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်၍၊ ကျူးဘား ဒီနိုင်ငံရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေအကြောင်းပိုသိချင်ရင်၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ), ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ o ဂျမေကာ.
ထို့ကြောင့်ကာရစ်ဘီယံဒေသ၏ပုံမှန်အကများမှာထိုကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေတွင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်၎င်းတို့သည်လွှမ်းမိုးမှုသုံးခု၏ပေါင်းစပ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဒေသခံ, စပိန်နှင့်အာဖရိက, အဆုံးစွန်သောသူတို့ရဲ့ ဦး တည်ရာကိုအဖြစ်ကျွန်ခံသောသူတို့ကအဲဒီမှာယူဆောင်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤအကများသည်များစွာသောကျွန်များနှင့်လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားများနှစ် ဦး လုံး၏ကြိုးစားအားထုတ်သောနေ့ကုန်ဆုံးချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ် ado မရှိရင်၊ မင်းတို့ဒီ rhythms အကြောင်းမင်းကိုပြောပြမယ်။
1.1 Salsa, ကာရစ်ဘီယံကခုန်တန်းတူထူးချွန်
1.2 Merengue, ဒိုမီနီကန်အလှူငွေ
1.3 အဆိုပါ Mambo နှင့်၎င်း၏အာဖရိကဇာစ်မြစ်
1.5 Cumbia, အာဖရိကအမွေအနှစ်
1.6 အဆိုပါ Bachata
ဤအကများနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားထင်ရှားသောပထမဆုံးအရာဖြစ်သည် တည်ရှိပြီးသောသူတို့ကို၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒါခေါ် သူတို့အနက်ရောင်ထဲမှာရှိနေတယ်မူလက Santa Lucia ကျွန်း၊ က ပွာ ကိုလံဘီယာ ဆက်ဖတ်ရန် ဒါမှမဟုတ်သူတို့ palenquero သို့မဟုတ်ဖြစ်ကြသည် နည်းနည်းစည်ပနားမားတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကတွေအားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကလူကြိုက်အများဆုံးကစားသမားတွေအကြောင်းပြောပြမယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကကာရစ်ဘီယံအကအခုန်အကသည်လူကြိုက်များခဲ့သည် နယူးယော့ ပြီးခဲ့သည့်ရာစု၏ခြောက်ဆယ်ကနေ။ ထို့နောက်ဒိုမီနီကန် ဦး ဆောင်သော Puerto Rican ဂီတသမားများဖြစ်သည် Johnny pacheco သူ့ကိုကျော်ကြားခဲ့သည်။
သို့သော်၎င်း၏ဇာစ်မြစ်များမှာကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံများသို့ပြန်သွားပြီးအထူးသဖြင့်ဖြစ်သည် ကျူးဘား။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်း၏စည်းချက်နှင့်တေးသံသည်ထိုနိုင်ငံမှရိုးရာဂီတကိုအခြေခံသည်။ အထူးသ၎င်း၏စည်းချက်ပုံစံကနေလာပါတယ် သူတို့ကကုဗဖြစ်ကြသည် နှင့်သီချင်းဆိုထံမှယူခဲ့ပါတယ် သူတို့ montuno ဖြစ်ကြသည်.
ဒါ့အပြင်ကျူးဘားသည်သူ၏တူရိယာအများအပြားဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ, အဆိုပါ Bongo, အ pailas, အgüiroသို့မဟုတ် cowbell စန္ဒရား၊ တံပိုးနှင့်ဘေ့စ်ကဲ့သို့သောအခြားသူများကဖြည့်စွက်ထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ယင်း၏သဟဇာတသည်ဥရောပဂီတမှလာသည်။
Merengue သည်လူကြိုက်အများဆုံးအကဖြစ်သည် ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ။ ဒါဟာအစသို့ရောက်ကြ၏ အမေရိကန် ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်ကမူ၎င်း၏မူလအစသည် ၁၉ ရာစုနှစ်မှစတင်ကာမရှင်းလင်းသေးပါ။ ဒါအများကြီးအကြောင်းဒါဒဏ္legာရီအများအပြားရှိပါတယ်။
လူသိအများဆုံးထဲကတစ်ယောက်ကစပိန်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ခြေထောက်မှာဇာတိသူရဲကောင်းကြီးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူ့ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအိမ်နီးချင်းတွေကပါတီပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူသည်ထော့နဲ့နေသည်ကိုသူတို့တွေ့မြင်သောကြောင့်ကခုန်သောအခါသူ့ကိုတုပရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်ကတော့သူတို့ခြေထောက်တွေကိုဆွဲယူပြီးတင်ပါးကိုရွှေ့လိုက်တယ်။
မဟုတ်သည်ဖြစ်စေအမှန်ပင်လှပသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်မှာဤအကသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာပြီးကြေငြာလိုက်သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ Intangible ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ယူနက်စကိုက။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးအစစ်အမှန်ဒေသ၏တောင်သူလယ်သမားများက၎င်း၏ဇာစ်မြစ် attribute သောအစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ Cibao သူတို့ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုမြို့တွေကိုရောင်းကြတာပေါ့။ သူတို့သည်တည်းခိုခန်းများ၌တည်းခိုကြပြီးတစ် ဦး ကို Perico Ripao ဟုခေါ်သည်။ ဒီအကကိုဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ enter ည့်ခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုထိုအချိန်နှင့်atရိယာကိုတိတိကျကျခေါ်ဆိုခဲ့သည် Perico Ripao.
သူ့ဂီတကတော့တူရိယာသုံးမျိုးကိုအခြေခံထားတယ်။ အကော်ဒီယန်, အgüiraနှင့် tambora။ နောက်ဆုံးတွင် meringue ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူမှာအာဏာရှင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ရာဖေးလ် Leonidas Trujilloဒီပရိတ်သတ်အားလုံးကအဲဒါကိုမြှင့်တင်ရန်ကျောင်းများနှင့်သံစုံတီးဝိုင်းများကိုဖန်တီးခဲ့သူများဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Mambo နှင့်၎င်း၏အာဖရိကဇာစ်မြစ်
ကာရစ်ဘီယံဒေသ၏ပုံမှန်အကများအနက်ဤသည်ကိုတီထွင်ခဲ့သည် ကျူးဘား။ သို့သော်ယင်း၏မူလအစသည်ကျွန်းပေါ်သို့ရောက်လာသောအာဖရိကကျွန်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုခေတ်သစ်ဒီကခုန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည် Arcañoသံစုံတီးဝိုင်း ပြီးခဲ့သည့်ရာစုသုံးဆယ်၌တည်၏။
ယူခြင်း ကျူးဘားDanzónအမျိုးအစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အမျိုးအစား၏ဒြပ်ပေါင်းများကိုထည့်သွင်းနေစဉ်ဒေသန္တရကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် မွန်တူနို။ သို့သော်၎င်းသည်မက္ကဆီကန်ဖြစ်သည် Damaso Pérez Prado အဘယ်သူသည်ကမ္ဘာတဝှမ်း Mambo popularize လိမ့်မယ်။ သူသည်သံစုံတီးဝိုင်းတွင်ကစားသူအရေအတွက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပုံမှန်မြောက်အမေရိကဂျက်ဇ်ဂီတဒြပ်စင်များဖြစ်သောတံပိုးများ၊
ဝိသေသလည်းပိုင်ထိုက်သောဖန်ဆင်းတော်မူ၏ တန်ပြန် ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ရဲ့စည်းချက်ကိုပြောင်းရွှေ့စေတယ်။ နှစ်ဆယ်ရာစုငါးဆယ်ငါးရာတုန်းကဂီတသမားတော်တော်များများက Mambo ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည် နယူးယော့ ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်ဆန်း။
ဒါ့အပြင်မွေးဖွားခဲ့သည် ကျူးဘား၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုတိကျစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ Pérez Prado ကထုတ်လွှင့်သောကခုန်မှု၏စိတ်ရှုပ်ထွေးသောစည်းချက်နှင့်အဆင်မပြေသောသိပ်ပြီးမကစားသမားများရှိသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာပိုပြီးသာယာတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့ကြတာကြောင့်၎င်းသည်သာယာတဲ့အသံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တေးသံနဲ့ချာချာမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။
အထူးသ, ၎င်း၏ဖန်တီးမှုကျော်ကြားတယောနှင့်တေးရေးဆရာမှစွပ်စွဲနေသည် Enrique Jorrínထို့အပြင်တစ်ခုလုံးကိုသံစုံတီးဝိုင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တော်အဆိုတော်များကသီဆိုသောသီချင်းစာသား၏အရေးပါမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ, ဒီဂီတ၏အမြစ်များပေါင်းစပ် ကျူးဘားDanzón နှင့်သူ့ကိုယ်ပိုင် Mambo, ဒါပေမယ့်သူက၎င်း၏ melodic နှင့်စည်းချက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းပြောင်းလဲ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဒြပ်စင်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် ဆွ မက်ဒရစ်ကနေ။ ကခုန်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းကိုဟားဗားနားရှိ Silver Star ကလပ်တွင်အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသည်ဟုဆိုကြသည်။ သူ၏ခြေရာများသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်အသံတစ်ခုထွက်လာပြီးဆက်တိုက်ရိုက်ခတ်မှုသုံးခုရှိသည်။ ပြီးတော့ Onomatopoeia ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကအမျိုးအစားကိုနှစ်ခြင်းပေးတယ် "ချာချာ".
ယခင်တစ်ခုနှင့်မတူဘဲ cumbia သည်အမွေဆက်ခံသူဟုသတ်မှတ်ထားသည် အာဖရိကန်ကခုန် အဘယ်သူသည်အမေရိကသို့ကျွန်အဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်သောသူတို့ကိုယူ။ သို့သော်၎င်းတွင်ဇာတိနှင့်စပိန်ဒြပ်စင်များပါရှိသည်။
ဒီကနေ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကခုန်ပြီးအာဂျင်တီးနား၊ ချီလီ၊ မက္ကဆီကန်နှင့်ကော့စတာရီကန်ကိုဘီယာတောင်မှပြောဆိုမှုများရှိသော်လည်းဤအကကိုမူလနယ်မြေများတွင်ရှာဖွေရမည် ကိုလံဘီယာနှင့်ပနားမား.
ကျနော်တို့ပြောနေတာကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အာဖရိကအလွှာကနေလာတာဖြစ်ပြီးအခြားတူရိယာတွေလိုပါပဲ အဆိုပါ maracas, Pitos နှင့် gouache သူတို့ကအမေရိကားမှာနေထိုင်ကြတယ်။ အဲဒီအစား, သိပ်ပြီးဝတ်ဆင်သောအဝတ်အစားရှေးဟောင်းစပိန်ဗီရိုအမျိုးအစားကနေဆင်းသက်လာ။
သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဘယ်အရာကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားသည်မှာအကကဲ့သို့သောကခုန်ခြင်းသည်စစ်မှန်သောအာဖရိကရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကာယအာရုံခံစားမှုနှင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ယနေ့တိုင်တွေ့နိုင်သေးသောကခုန်ခြင်း၏ပုံမှန်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုဖော်ပြသည် အာဖရိကတိုက်.
ဒါဟာအစအမှန်တကယ်ကခုန်ဖြစ်ပါတယ် ဒိုမီနီကန် ဒါပေမယ့်လောကဓာတ်လုံးကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်ခြောက်ဆယ်မှစတင်ခဲ့သည် စည်းချက် boleroဒါပေမယ့်လည်းကနေသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတင်ဆက်ပေမယ့် မဲ့ရင်ဂယ့ နှင့် သူတို့ကကုဗဖြစ်ကြသည်.
ထို့အပြင် bachata အဘို့သူတို့အားရစ်သမ်၏ပုံမှန်တူရိယာအချို့ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, bolero ၏ maracas ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် အဆိုပါgüiraထို့အပြင်ဒေသန္တရမိသားစုမှပိုင်ဆိုင်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် ဂစ်တာ.
အခြားသောအကများနှင့်အဖြစ်အပျက်များနည်းတူဘဟာချိကိုအစပိုင်း၌အနှိမ့်ဆုံးအတန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ထိုအခါကအဖြစ်လူသိများခဲ့သည် "ခါးသောဂီတ"သူတို့ရဲ့ themes များ၌ထင်ဟပ်သော Melancholie ရည်ညွှန်းဖန်ဆင်းသော, ။ ၎င်းသည် UNESCO မှခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမတိုင်မီကအမျိုးအစားသည်နိုင်ငံတကာတွင်ပျံ့နှံ့သွားသောနှစ်ဆယ်ရာစုရှစ်ဆယ်ကျော်များတွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ Intangible အမွေအနှစ်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်, bachata နှစ်ခု subgenres သို့ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ The .ရာဝတီ သူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤအကအခုန်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအီလက်ထရောနစ်တူရိယာများမှဖန်တီးထားသောဂီတနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအခြားသောအမျိုးအစားများနှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည် ဂျက်ဇ်ဂီတသို့မဟုတ်ရော့ခ်။ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေသူဖြစ်ခဲ့သည် ဆိုနီယာ Silvestre.
ဒုတိယ subgenre ဒါခေါ်ဖြစ်ပါတယ် ပန်းရောင် bachataကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်များမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ငါတို့၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုငါတို့အားပြောရန်လုံလောက်ပေ၏ ဗစ်တာဗစ်တာ ထို့ထက်ကား၊ Juan လူး Guerra ဒါကြောင့်သင်ကနားလည်သဘောပေါက်ရန် ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည် ရင်ခုန်စရာသီချင်း.
လက်ရှိအမျိုးအစားတွင်မူ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးပြသမှုမှာဒိုမီနီကန်မှဆင်းသက်လာသောအမေရိကန်အဆိုတော်ဖြစ်သည် Romeo ဆန်းတို့စပထမဆုံးအဖွဲ့နှင့် Aventuraနှင့်ယခုတစ်ကိုယ်တော်။
ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် အဆစ်, အဘယ်သူ၏ဇစ်မြစ်၏ပိုင်နက်တွင်အိပ်ရကြ၏ ကိုလံဘီယာ စပိန်၏ရောက်ရှိမီ။ ၎င်းသည်ဇာတိပိုက်များမှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုအာဖရိကရစ်သမ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးဖြားယောင်းဖွယ်ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ လတ်တလောတွင်၎င်းသည်တီးမှုတ်ခြင်းနှင့်ပွဲလမ်းသဘင်တေးသီချင်းများဖြင့်ကစားသည့်အကအခုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကခုန်ရန်, သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ယူပါ ပုံမှန်ကိုလံဘီယာဝတ်စုံ။ ဒါ့အပြင်ဒီကခုန်အမျိုးအစားပိုင် Fandango၎င်း၏စပိန် namesake နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသော။ မူလဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှဖြစ်သည် သကြားလျင်မြန်စွာမှပြန့်နှံ့ ကိုလံဘီယာဥရဘ။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောစင်္ကြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိန်းမများသည်အမျိုးသားများ၏ပရောပရည်ကိုငြင်းပယ်ရန်ဖယောင်းတိုင်များသယ်ဆောင်ကြသည်။
ပို၍ ရှင်းလင်းသောအာဖရိကအမြစ်များသည် မြေပုံ။ ဒီအကမှာ, ဗုံများနှင့်စည်းချက်သတ်မှတ်သူခေါ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏မူလအစသည်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ သို့သော်ယနေ့တွင်ယင်းသည်ငြင်းစရာမရှိသောပွဲလမ်းသဘင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတက်ကြွသောအကတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသင့်အကြောင်းပြောပြပါမယ် le။ အခြားကာရစ်ဘီယံဒေသမှအခြားအကများကဲ့သို့၎င်းသည်အက၊ အဆုံးစွန်သောဗုံကိုသာနှင့်လက်ဖဝါးနှင့်အတူထုတ်ယူသည်။ ယင်း၏အပိုင်းတွင်မိန်းမသည်အမြဲတစေသီဆိုလေ့ရှိပြီးအကကိုစုံတွဲများနှင့်အဖွဲ့များကဖျော်ဖြေနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာရေဘီယံ၌အကျော်ကြားဆုံးအကများအကြောင်းပြောပြပါမည်။ ခင်ဗျားတို့ကိုပထမဆုံးပြောခဲ့တာကတော့နိုင်ငံတကာကျော်ကြားမှုနဲ့ကျော်ကြားမှုပါပဲ။ ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, အဆုံးစွန်သောသူတို့သည်အညီအမျှကောင်းစွာသူတို့ဖျော်ဖြေရှိရာနယ်မြေ, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ၏ကျန်အတွက်ဒီထက်နည်းလူသိများကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကာရစ်ဘီယံဒေသ၏ပုံမှန်အက။ သူတို့တွင်ကျနော်တို့ကဖြတ်သန်းအတွက်ဖော်ပြထားခြင်းပါလိမ့်မယ် ဝေးကွာအဆိုပါ စာရေးသူစပိန်တို့ကအမေရိကသို့ယူဆောင်လာသည် ငါသိလိမ့်မယ်ငါသိတယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » ယဉျကြေးမှု » ကာရစ်ဘီယံဒေသ၏ပုံမှန်အကများ